जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय
Home / समाचार / जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय 0
यो जाडोमा आफूलाई स्वस्थ राख्न सबैले आवश्यक सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ ।
जाडोमा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ र यसलाई बढाउनका लागि केहि प्राकृतिक विधी अपनाउन सकिन्छ । यसले प्राकृतिक रुपमै हामीलाई न्यानो राख्छ । बाह्य जाडोबाट शरीरलाई बचाउँछ । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
तातो तेलले मालिस
चिसो पेयबाट बच्नुस
जाडोमा सताउँछ दमले, के खाने, के नखाने ?